Izindaba - I-7th Taizhou International Electrothermal Technology
I-7th Taizhou International Electrothermal Technology
Kusukela ngoNovemba 1 kuya ku-3, 2019, i-7th Taizhou International Electrothermal Technology and Equipment Exhibition ibibanjelwe eTaizhou International Expo Center. UJiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co, Ltd. umenyiwe ukuthi abambe iqhaza kulo mbukiso futhi wakhombisa imikhiqizo yakamuva.Sikhombisa ubuchwepheshe, ukubheka phambili, kanye nokusebenziseka kokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo kobuchwepheshe nemishini kagesi.
I-Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. ilisebenzise ngokugcwele leli thuba ukubamba iqhaza ekushintshisaneni okujulile, izingxoxo, ukufunda nokuqonda izidingo eziphakeme zamakhasimende nokulindelwe kwezinto ze-silicon carbide zokushisa endaweni yakamuva, sinakho sifinyelele emgomweni wokuphelelisa imikhiqizo yethu, sisebenzisa izinzuzo zethu, futhi sithuthukisa imikhiqizo ezayo. Lo mbukiso uqhubeke wandise ithonya lenkampani nokuthandwa embonini efanayo, futhi unokuqonda okujulile nokubanzi kwamabhizinisi amahle kakhulu futhi athuthukile embonini efanayo, ngakho-ke lo mbukiso weTaizhou International Electrothermal Technology and Equipment ugcwele impumelelo!
Kulo mbukiso, siqokomise izinto zethu zakamuva ezikhethekile zokushisa i-silicon carbide zokugeza ingilazi yamathini okugeza kanye nezinga lokushisa eliphakeme kakhulu le-silicon carbon elements ka-1625 ° C.
Enqubeni yokukhiqiza ingilazi yokuntanta, njengoba i-silicon carbon heat element isendaweni enzima yokugeza ithini isikhathi eside, kunezidingo ezikhethekile eziqinile zezinto zokushisa ze-silicon carbon zokugeza kukathayela. Ngokuvamile, into yokushisa ye-silicon carbide ayikwazi ukumelana nokubola kokushisa okuphezulu negesi elonakalisayo. Ngakho-ke, into yokushisa ye-silicon carbon yokugeza kukathayela kufanele ibe nento yokushisa esezingeni eliphakeme kakhulu enokuphila okude kakhulu.
Kwezinye izindawo ezinzima, amakhasimende anezidingo nezidingo eziqinile ngokweqile zento yokushisa yento yokushisa ye-silicon carbon. Ngokusho kwalokhu, i-SICTECH silicon carbon heat element ithuthukise into yokushisa ephezulu kakhulu ye-silicon carbon element edlula isilinganiso esimaphakathi sokushisa kwe-silicon carbon rod ye-1500 ° C, ukuze izinga layo lokusebenza lifinyelele ku-1625 ° C! Futhi ukuhlinzeka amakhasimende ngezinhlobonhlobo zezinketho zomzimba ezishisa kakhulu, okukhethwa kukho kwe-MHD ultra-high density silicon carbon rod heat body, i-HD high-density solid solid body, i-HD ephezulu kakhulu.
Umbukiso wezinsuku ezintathu weTaizhou International Electric Heating Technology and Equipment Exhibition uhehe imibuzo eminingi kubahlanganyeli. Abasebenzi bakwaJiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co, Ltd bebegcwele umdlandla nokuzimisela okukhulu, kanye nezixazululo zomkhakha wobuchwepheshe. Umxhumanisi uchaze umthetho osebenzayo wento yokushisa ye-silicon carbide, ukusetshenziswa kwezinyathelo zokuphepha nokunye. Ngokusebenza okugcwele, ukubonisa ividiyo, njll., Umxhumanisi unokuqonda okuphelele nokwazisa ngemikhiqizo yethu.
Ngalombukiso we-Taizhou International Electrothermal Technology and Equipment Exhibition, sihlangane namakhasimende, abasabalalisi nabangane abavela kuwo wonke umhlaba. Siye saqonda futhi safunda ubuchwepheshe bamuva kanye nemiqondo embonini yokushisa kagesi. Siyazi ukuthi singenza iminikelo emikhulu embonini yokushisa kagesi kanye nokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo. Sinokuqonda okujulile kwezibopho nezibopho okufanele sizithwale. Ngikholwa ukuthi sizoqhubekela phambili ngokuqinile, futhi siba ngcono!